Sei Vashambadziri veEmail Vari Kushandisa Predictive Analytics Kuvandudza Yavo Ecommerce Mhedzisiro | Martech Zone
Sei Vashambadziri veEmail Vari Kushandisa Predictive Analytics Kuvandudza Yavo Ecommerce Mhedzisiro
Chishanu, February 25, 2022 Chishanu, February 25, 2022 Prasanna Chitanand
Kubuda kwe predictive analytics mune email kushambadzira kwave kufarirwa, kunyanya muindasitiri ye ecommerce. Kushandisa fungidziro yekushambadzira matekinoroji ine kugona kwekuvandudza kunanga, nguva, uye pakupedzisira kushandura bhizinesi rakawanda kuburikidza neemail. Iyi tekinoroji iri kuita basa rakakosha mukuona kuti ndezvipi zvigadzirwa zvingangotengwa nevatengi vako, pavanenge vachizotenga, uye zvemukati zvemukati zvinofambisa chiitiko.
Chii chinonzi Kufembera Kushambadzira?
Kufanotaura Marketing izano rinoshandisa dhata rekuzvibata rakapfuura kufanotaura hunhu hweramangwana. Dhata, ongororo, uye fungidziro yekuyera matekiniki anoshandiswa kuona kuti ndeapi zviito zvekushambadzira zvingango shandura zvichibva pamaprofile evatengi uye maitiro. Iyo data inoita basa rakakosha pakuita sarudzo dzakangwara. Kana ikaiswa kune email kushambadzira, maalgorithms anogona kukubatsira kunanga vateereri vakakodzera, kusimudzira kubatanidzwa, kupa mamwe shanduko, uye kuunza mari yakawanda kubva kuemail mishandirapamwe.
Chii chinonzi Predictive Analytics?
Kufanotaura analytics inzira inotungamirwa nedata inoshandiswa nevashambadzi kuti vanzwisise kudyidzana kwevatengi mumakampani apfuura uye chiitiko chesaiti chinogona kufanotaura maitiro emangwana. Predictive analytics inobatsira mukugadzira mamwe emunhu uye akakodzera ekushambadzira mishandirapamwe. For tsambambozha Marketing nyanzvi, fungidziro yedata mapoinzi inopa ruzivo uye mikana yemabatiro evatengi senge:
Mukana wekuburitsa kana kuzvibvisa
Nguva yakakwana yekutenga
Zvigadzirwa zvinoenderana kana zvikamu zvechigadzirwa
Huwandu hwehupenyu hwemutengi hwese (CLV)
Iyi data inogona kukubatsira kuita mazano, bvunzo mamiriro, kana kutoita otomatiki kutumira meseji yakakodzera panguva chaiyo. Heano mafungidziro anogona kubatsira kusimudzira meseji, uye kuyera kuita kwese email.
Kutenga chinangwa -Kunzwisisa kuti muenzi angaite sei kutenga kunogona kukubatsira kuti uenderere mberi uye kuendesa izvo zvirimo mumeseji yako. Vashanyi vane mwero wepamusoro wekufarira vanogona kutendeuka, uye kuchengetedza zvidzikiso zvako zvevakadaro vanosangana kunokwidza LTV.
Zuva rakafanotaurwa rekutenga kuri kuuya -Midhi-renji uye yakanyanya kuomesesa ESPs inokwanisa kuunganidza maitiro ekutenga ekutenga uye kutarisira kuti pavachaisa odha yavo iri kuuya, zvichikugonesa kuunza otomatiki email ine zvigadzirwa zvinokurudzirwa panguva chaiyo.
Favorite chigadzirwa kana chigadzirwa chikamu -Kuziva chigadzirwa kana chikamu chechigadzirwa chinonyanya kufarirwa nemushandisi wega wega kunoita kuti iwe ugadzire zvirinani maemail ako nechigadzirwa chinofarirwa navo.
Zvinotarisirwa kukosha kwehupenyu hwemutengi (ClmV) - Nekutarisa kukosha kwenhoroondo yemutengi, nguva yekutenga kwake, uye zuva rinotarisirwa rekutengazve, kukosha kwehupenyu hunofungidzirwa hunogona kugadzirwa. Ongororo iyi inokubatsira kuti unzwisise kuti ndiani pakati pevatengi vako anonyanya kuvimbika kana kuti angango shandura paavhareji kukosha kweiyo (AOV).
Kuita fungidziro yekufungidzira mumushandirapamwe wako wekushambadzira email kuchaita kuti mishandirapamwe yako itaridzike yemunhu, yakakodzera, uye nenguva - kuvandudza mari yako.
Sei Predictive Analytics Kuwana Momentum?
Iwo ese ari maviri misika yekufungidzira uye yekufungidzira analytics musika wakamira paUS $ 10.01 miriyoni muna 2020 uye unofungidzirwa kubata $35.45 bhiriyoni panosvika 2027, uye kukura pamwero wekukura kwegore.CAGR) ye21.9% pakati pa2020 kusvika 2027.
Predictive Analytics Market Statistics: 2027
Pane zvinhu zvakati wandei zviri kukurudzira kufanotaura kwekufungidzira kweanalytics.
Kuchengetedza matekinoroji haadhure uye anogona scalable, achigonesa kugona kubata uye nekukasira kuongorora terabytes yedata.
Kugadzirisa kumhanya uye kugoverwa kwendangariro pamaseva uye maseva chaiwo (pamasevha ese) inopa mikana yekubatanidza iyo hardware kuti imhanye zvisingaverengeki zvimiro zvekufanotaura data.
Mapuratifomu ari kubatanidza maturusi aya mwero wakakura uye kuita kuti tekinoroji ive nyore uye inokwanisika kune avhareji bhizinesi.
Zvese zviri pamusoro zviri kupa kusimudzwa kwakakosha mumibairo yemushandirapamwe wekushambadzira, zvichikonzera kukurumidza kudzoka pakudyara tekinoroji (ROTI).
Kushandiswa kwePredictive Analytics muEmail Marketing
Kana zvasvika kune email kushambadzira, kufungidzira analytics inotsigira email yesangano sevhisi uye inosanganisa chaiyo-nguva yekuzivikanwa maitiro neapfuura mutengi data kugadzira ese ari maviri otomatiki uye akasarudzika email mishandirapamwe. Yayo yakawedzera mukana ndeyekuti inobatsira kubva pakutora uye hukama-kuvaka kune mutengi kuchengetedza uye kuhwina-kumashure email mishandirapamwe.
Hedzino nzira ina dzekufungidzira analytics inovandudza yako email yemushandirapamwe mazano:
Kuwana vatengi vatsva -Kupfuura mamwe masvikiro, mukana wekutarisa uye kuona vateereri vakafanana inzira yakanaka yekushambadzira kune vangangove vatengi. Iyo yakawanda yakawanda yeinjini dzekushambadzira inokwanisa kupinza email kero kuti inyore vashandisi vako maererano nehuwandu hwevanhu, nharaunda, uye kunyangwe zvichibva pane zvavanofarira. Zvadaro, iyo mbiri (kana profiles) inogona kushandiswa kushambadza kune vangangove vatengi neinopihwa kusaina-up kune yako email kushambadzira.
Kuwedzera kutendeuka -Kana vangangove vatengi vanove vekutanga vanyoreri kugamuchira email yekusimudzira kubva kukambani, ivo vanowanzo gamuchira inogamuchirwa email inoteedzera kubhokisi ravo rekunyora. Chinangwa chayo ndechekuvakurudzira kutenga chigadzirwa. Saizvozvo, ese-nyowani tarisiro anowana maemail akadaro, uye dzimwe nguva mhando yekusimudzira inopa. Nekuita zvekufungidzira analytics kune ese ari maviri edemographic, uye maitiro data, unogona kugovera vangangove vatengi - kuyedza akawanda mameseji, uye zvinopihwa - kugadzira anodzidzisa, akakodzera, uye ega maemail anovandudza shanduko, uye kuunza mari.
Kuvaka hukama hwekuchengetedza vatengi - Predictive analytics inogona kushandisa zvigadzirwa kurudziro sarudzo dzekuita kwevatengi, uye kuchengetedza. Iyi data inogona kukubatsira kunanga vatengi chaivo vakambotenga zvigadzirwa zvako kana kuzvitsvaga pawebhusaiti yako. Kuwedzera zvinhu zvakasiyana siyana sezera, murume kana mukadzi, huwandu hwekuodha, nzvimbo, nezvimwe. Zvinogoneka kuziva kuti ndezvipi zvigadzirwa zvavanoda kutenga mune ramangwana. Neiyi data, unotumira email zvemukati uye zvinopihwa kune wega tarisiro. Predictive analytics inobatsirawo pakuona kuti vatengi vanotenga kakawanda sei, unogona kunzwisisa iyo yakakwana frequency yekutumira maemail ane chekuita nechigadzirwa kwavari.
Mutengi kuhwina-kumashure zano – Kutumira a takakusuwai meseji mune email kune vese vatengi mushure menguva yakati rebei kubvira pavakapedzisira kutenga chigadzirwa. Nerubatsiro rwekufungidzira analytics, unogona kugadzira yakasarudzika maemail ekuhwina-kumashure, uye tsvaga yakanakisa nguva yekuvharisa yekutumira maemail kwavari, uye nekupa zvimwe zvidzikiso kana zvinokurudzira kuti uzviite zvakare.
Kufanotaura kushambadzira chombo chine simba kune vatengesi kuti vanzwisise vavanonangana nevateereri uye vabatsire kushandisa zano rine simba mumakambani avo eemail ekushambadzira. Neizvi, unogona kufadza vanyoreri vako, uye wovashandura kuva vatengi vakavimbika, izvo zvinozotungamira mukuwedzera kwekutengesa.
Tags: kutenga chinangwachurnmwero wekushandurwamutengi hupenyu hwakawandamutengi winbackecommerceeEmail Marketingvateereri vakafananamunhu zvichienderana kugutsikanapredictive analyticskufanotaura email kushambadzirakufungidzira kushambadzirachigadzirwa kurudzirozuva rekutengakunyoresa kutorasubscriber kutorasubscriber churn
Prasanna ndiye Senior SEO Nyanzvi pa Express Analytics. Ane ruzivo muSEO, Social Media, Blogging, Online Reputation Management, Google Ads, uye YouTube Vhidhiyo Optimization.
UTM Parameters MuImeyili Inoshanda Sei NeGoogle Analytics Campaign?
Nhungamiro Yekutora Zvirinyore Backlinks uye Chinzvimbo paGoogle Uchishandisa AI